ऋतुको चिया पसल | मझेरी डट कम
ऋतुको चिया पसल
editor — Sun, 09/06/2015 - 04:21
फस्ट लभ (कथा संग्रह)
वि.सं. २०५१ ।
ऋतुको चिया पसलमा मेरा केही जिप्सी यादहरू छुटेका छन्…यादका भेडाबाख्राहरू धपाउन/गाईवस्तुहरूलाई गोधुलि साँझमा घर फर्काउन म कहिलेकाहीँ विस्मृत इलाकाका गल्लीहरूमा देखा पर्छु । अतीतको गोठालो भई डुली हिँड्छु ।
ज्ञानीहरू भन्छन्, ‘अतीतमा डुल्ने डुलुवाहरू मूर्ख हुन् ।’ आफू कुनै पनि ‘रूप प्लस सार’मा ज्ञानी पुरुष नभएको हुनाले म लाक्षणिक हिसाब–किताबले मूर्ख नै हुँ । र, सायद पटमूर्ख पनि । रूप र सारको गन्जागोलमा नपर्नु नै यस बखत रुचिकर होला । कि कसो ?
तर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ : जीवनमा भए गरेका सम्पूर्ण मूर्खतापूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण घटना, उपघटना या कार्यकारी घटनाहरूको लेखाजोखा गर्न म यहाँकहाँ ती स्मृतिजन्य उद्यानहरूतिर डुली हिँड्छु, घुमी हिँड्छु ।
ऋतुको चिया पसल वास्तवमा एलेन गिन्सबर्गको कुनै कवितामा फेला पर्ने स–सानो कफी हाउसजस्तै थियो । सात–आठ थान मेच टेबल, खित्रिङमित्रिङ सामान, भित्तामा मोनालिसाको पोस्टर, प्लास्टिकका बाटा एवं बाल्टीहरू, स्टोभ, यस्तै यस्तै । अलमस्त टाइपका ग्राहकहरूले चिया पिउने अड्डा ।
ऋतु चिया बनाउँथी । के चिया बनाउँथी र ! चियासित आफ्नो पार्थिव–हृदय उमाल्थी, सायद । सादा कुर्ता सल्वार लगाउने ऋतु कुनै मौन तपस्वीझैँ सदा शान्त मुद्रामा हुन्थी । ऊ जवान थिई । म पनि कम जवान कहाँ थिएँ र ! ऊसित मेरो कुराकानी कमै हुने गर्थ्यो । गफगाफ गर्ने जिम्मा त अरु ग्राहकहरूको नै थियो । म त त्यहाँ छेउको टेबल ओगटी चुपचाप अद्भुत किताबहरूको रहस्यलोकतिर हराइरहेको हुन्थेँ ।
‘अर्को कप चिया ?’ ऊ आफैँ सोध्थी । मलाई उस्को अनुहार हेर्ने फुर्सद हुँदैनथ्यो । सायद ऊ नै चिया उमाल्दै मेरो मङ्गोल अनुहार हेरी बस्थी पसलको कुनाबाट । तात्तातो चिया मेरो अगाडि राखिदिन्थी ।
मैले पढिरहेको पुस्तकको नाम पनि ऊ यसो चिहाउँदी होला र ! डायरीमा, नोटबुकमा म के फुटनोट्स लेखिरहेको हुन्थेँ, उसले कहिल्यै थाहा पाई होला ?
वास्तवमा, त्यसबेला म साहित्यको नवोदित पाठक बन्ने सत्कर्ममा जुटेको थिएँ । आफूलाई म एक उदीयमान पाठक बनाउन चाहन्थेँ । साहित्यमा उदीयमान या नवोदित केवल ‘लेखक’ हुनुपर्छ भन्ने टिप्पणी विश्वसाहित्यको कुन संविधानको कतिऔं धारा/उपधारामा उल्लेख गरिएको छ, म बबुरोलाई थाहा थिएन ।
तसर्थ, म एक उदीयमान पाठक बन्ने सन्दर्भमा थिएँ । मेरो सम्पूर्ण पेसा भन्नु नै साहित्य, कला, दर्शन, चित्रकारिताको अध्ययन नै त थियो नि ! पढ्नैका निम्ति मैले आफ्नो जीवनको आकर्षक प्रथम नोकरी छाडेँ । कलेज छाडिदिएँ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक इम्पेरियलिजममा कहिल्यै रुचि जागेन । स्वाध्ययनकै निम्ति वसन्तपुरस्थित दाजुभाउजूको परिवारलाई छाडिदिएँ । पाटनको चाकुपाटमा एउटा डेरा लिएँ जहाँ ऋतुको चिया पसल पनि थियो ।
त्यो चिया पसलमा मैले आफ्नो केही आयु फ्याँके । घन्टौं बसोवास गर्थें त्यहाँ ।
ऋतुको परिवार मेरो कोठाभन्दा माथिको तल्लामा बसोवास गर्थ्यो । तीन दिदीबहिनीमा ऊ माहिली छोरी थिई । दाइ पाटनको इलेक्ट्रिक पसलमा सेल्सम्यान थियो । आमा आध्यात्मिक पाराकी थिइन् । गुरू बाल योगेश्वरको शिष्य । भनूँ भने पूरै परिवार गुरूजीको आशीर्वादमा थियो । बुबाचाइने अस्तित्वदेखि सफाचट भैसकेका थिए !
ऋतुकी आमाले एक दिन भनेकी थिइन्, ‘कुमार बाबु ! हिँड्नुस् भोलि शनिबार तपाईंलाई गुरू महाराजजीकहाँ लैजान्छु । जानुहुन्छ ?’
‘मैले त्यहाँ गएर के पो गर्ने होला ?’ भनेँ ।
‘प्रवचन सुन्ने । सत्सँग गर्ने ।’
प्रवचन र सत्संगको अभ्यास नगर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । ओशो, युजी अनि कृष्णमूर्ति, नागार्जुनजस्ता आध्यात्मिक गुरूहरूको किताबी सत्संगको अद्भुत लत लागिसकेकै थियो । यसो गुरू महाराजजीको सत्सँग ‘ट्राई’ मार्दा राम्रै त होला नि !
सामाखुसीको प्रवचन हल आध्यात्मिक फ्लेभरमा/सम्पूर्ण ‘औरा एण्ड अरोमा’ सितै मेरो प्रतीक्षा गरिरहेझैँ लाग्यो । ऋतु छेवैमा बसी । केही भजन कानभित्र छिरे । भीडियो स्क्रिनमा गुरू महाराजजी बाल योगेश्वर देखापरे । हलका सप्पैहरू आध्यात्मिक मुडमा देखा परे । ऋतुले भनी, ‘प्रवचन ध्यानपूर्वक सुन्नुस् । तपाईंको जीवनमा काम लाग्छ ।’
जीवनमा काम लाग्ने प्रवचन त ध्यानपूर्वक सुन्नै पर्‍यो । एउटी जवान युवतीले भनेपछि झन् टार्ने नै कसरी ! भिडियो प्रवचनमा गुरूजी उवाच :
मनुष्यको इस तरह से सम्मोहित किया गया कि वो अपनी अन्दर कि यात्रा हि तय कर नहीँ पाता । कितनी अजीव बात है ये कि अपना आत्माकी खोज वो बाहर कि दुनियाँमे करता है । भौतिक पदार्थों मे वो खो गया है । मानव सभ्यता के इतिहास मे मैने आद्मीको इतनी विवश और दु:खदायी स्थिति मे कभी नहीँ पाया । बचपन से लेकर युवा तक, युवा से लेकर बुढापे तक आद्मी सिर्फ बाहर हि देख्ने कि अभ्यास करता है । जब कोही बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे कोही खिलौना थमा देति है । बच्चाको आदत पड जाती है खिलौनासे । वो खिलौना वादमे बदल जाती है और आद्मी कि स्थायी मित्र बन जाती है । वो पडोस कि महल, सडक कि ल्याम्प पोस्ट, विज्ञापन कि होर्डिङ बोर्ड देखकर बडा होता है ।
अपनी भितर कि यात्रा मे वो भला क्याँ पडे ! क्योँ कि उसे तो बस पकडना है । ट्रेन छुट जाती है । अपनी अस्तित्व कि खजाना छुट रही है, उसे इसका कुछ पता नहीँ । मै कहेता हुँ, इस भागदौड कि जीवन से कुछ देर विश्राम लो । ध्यानमे डुबो । अपनी अन्तसकी यात्रा मे तुम्हेँ कोही भिसा जरुरत नहीँ होगी । कोही पासपोर्ट जरुरत नहीँ होगी । जागो और अपने आपको ढुँडो । बहुत हो गई वेवफाइ अपनी आत्मा से । अपनी आत्मा कि मौन प्रेम निवेदन स्वीकार करेँ … ।
झसँग भएँ । आफ्नो आत्माको प्रेम निवेदन स्वीकार गरियोस् भनी गुरूजीले भर्खरै भने । मौन तपस्वी ऋतुलाई यसो हेरेँ । ऊ त पद्मासनमा प्रवचनको आनन्द लिइरहेकी थिई आँखा चिम्लेर । भिसा या पासपोर्ट नै नलिई ऊ कुन आनन्दलोकमा उडिरहेकी थिई ? मेरो हृदयलोकमा आएको त कुनै खबर छैन ।
ऋतुलाई उसकै आफ्नो आनन्दलोकमा मैले छाडिदिएँ ।
जीवन मेरो औसत रूपमा सरल रेखामा कोरिएको गल्लीमा हिँडिरहेको थियो । तर पछि वक्ररेखामा मेरो जीवन कुनै भुस्यहा कुकुरझैँ अस्तित्वका तपसिल गल्लीहरूमा भड्कन थाल्यो । मैले चाल पाएँ, सारा मानिसझैँ बाँच्नु मेरो अधिकार थियो । तर, प्राथमिक अधिकार मात्रै मेरो निम्ति पर्याप्त थिएन । सार्वभौम भन्नुस् या संवैधानिक अस्तित्वमा जीवनका केही पर्सनल छनोट पनि त हुनु परो नि ए गाँठे ! मैले छनोट मन पराएँ । मैले मीरा भट्टराईलाई रूचाएँ । माफ गर ऋतु !
ऋतुको चिया पसल उस्तै थियो । त्यहाँ हजारौं कप चिया र त्यति नै खिल्ली चुरोट खाएँ हुँला । सत्सँग या प्रवचनले मेरो आत्माको शुद्धीकरण खै किन हो, हुनै सकेन । हृदय परिवर्तन भन्छन् नि ज्ञानीहरू ! खै त ! आफ्नो हृदय त उस्तै छ, खनिज जस्तो, शिलालेखजस्तो…
चिया पसलमा कहिलेकाहीँ ग्राहकसित आध्यात्मिक भनाभन हुन्थ्यो । सन्त महाराजझैँ गरी फुर्ती लगाउँदै कोही भन्थ्यो, ‘मनुष्यको केन्द्र आत्मा हो । मानव देह त आखिर के नै पो हो र ! केवल भ्रम हो, माया हो, मृगतृष्णा हो ।’
मलाई आत्मा र मानव देहबीचको यो डिमार्केसन–रेखा उचित लाग्दैनथ्यो । म भन्थेँ, ‘मृगतृष्णा नै सही मानव देह केही त हो नि, यार !’
म मानव देहवादी या आत्मवादी केही थिइनँ । तर मृगतृष्णाप्रति मेरो चाख किन त्यस्तो रोचक थियो त ? यसको एउटा कारण छ । म एउटी महिलाको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेको थिएँ ।
ऊ मेरी छिमेकी थिई । जिजस क्राइस्टले भन्नुभएकै छ : लभ दाइ नेवर (आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर) ।
मैले छिमेकीलाई प्रेम नगर्नुपर्ने कुनै कारण थिएनन् । प्रेममा तर्क नाजायज हो, प्रेममा विचार अवैध हो । यस्तै मनको लड्डुमा रमाइरहेँ । जर्मन दार्शनिक मार्टिन लुथर (अमेरिकी मार्टिन लुथर किङ होइन)ले भनेकै छन् नि : रिजन इज द डेभिल्स होर । त्यस्तै केही ठानेँ । उसलाई अँझै प्रेम गरेँ । ऊ नै भई मेरो पहिलो (बुढाहरू भन्छन् नि) पिरेम ।
मेरो प्रेमको समस्या के मात्र थियो भने मीरा भट्टराई विवाहित थिई । ऊ कसैको आधिकारिक पत्नी थिई ।
मीरा मेरो डेराबाट लगभग सय मीटर परको एउटा घरमा केही महिनादेखि बस्दै आएकी थिई । तर कालान्तरमा ऊ मेरो जिन्दगीको सुनसान करिडरमा चुपचाप ओहोरदोहोर गर्न थाली । र, एक साँझ मेरो हृदयको दैलोमा आफ्नो मसिना औंलाहरूले ‘टयाक्क टयाक्क’ गरी आवाज दिई । मैले दैलो उघारेँ । मुस्कुराउँदै उसले भनी, ‘मे आई कम इन् ?’
ट्वाँ परेँ । ‘अहो ! एस प्लिज्, गेट इन्साइड’ भन्नुपर्‍यो ।
उसलाई मैले आफ्नो हृदयको अतिथिकक्षमा स्वागत गरेँ । बेरोजगार युवाको अतिथि कक्ष कस्तो हुन्छ ? लथालिंग एवं अस्तव्यस्त न हो ! उसले सरसफाइ गरी । कुर्सीमा बसी । म ट्वाँ पर्दै उसलाई हेरिरहेँ ।
ओछयान पनि चिटिक्क पर्दो रैछ त ! म हुस्सुलाई बल्ल पो थाहा भयो । कोठाभरि यत्रतत्र छरिएका तन्त्रशास्त्रका, दर्शनशास्त्रका, आख्यानशास्त्रका, कोकशास्त्रका ग्रन्थहरूलाई उसले जतनसाथ र्‍याकमा थान्को लगाइदिई ।
हेरचाह गर्ने, माया गर्ने स्त्रीको जीवनमा ठूलो महत्त्व हुँदो रै’छ । मैले मनमनै भनेँ ।
ओभरकोट, मफलर, ज्याकेट इत्यादि लुगाफाटाहरूलाई हयांगरमा झुन्डयाइदिई । खुम्चिएका, खजमजिएका कपडालाई प्लास्टिकको झोलामा प्याक गरी, र भनी, ‘इस्त्री गरेर ल्याइदिन्छु ।’
‘मेरो मन पनि खुम्चिएको, खजमजिएको छ । त्यसलाई पनि स्त्री– ए सरी ! इस्त्री लगाइदिए क्या जाती, क्या दामी हुन्थ्यो’ भन्नु मन थियो उसलाई, भनिनँ ।
चिया बनाएँ र उसलाइदिएँ ।
ती कालतिर म कविताको व्यसनमा थिएँ । कविता–कर्ममा थिएँ । डायरी लेख्ने पुरानो आदत ज्युँदै थियो । उसले पढ्ने रहर गरी । उसको चाहनामा ल्याप्चे लगाउँदै पाँचवटा नोटबुक रिफर गरेँ । गोविन्द गोठालेको ‘पल्लो घरको झयाल’ पनि पढिछाड्ने जिद्दी गर्न थाली । बदलामा मैले गोविन्दका भाइ विजय मल्लको ‘अनुराधा’ उपन्यास पनि बोनसमा चढाएँ ।
मेहदी हसन, गुलाम अली, जगजित–चित्रा सिंह, चन्दन दासका गजल चक्का पनि ‘लौ तपाईंले यिनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्छ’ भनी दिएँ । अनुप जलोटाको भजनचाहिँ दिइनँ । भजन–कीर्तनले रोमान्टिक मुडलाई ध्वस्त पार्थ्यो कि ! अर्को कप चिया म आफैँ बनाउँछु भनी ऊ स्टोभ बाल्न थाली । पुरानो फिलिप्स टेप रेकर्डरमा ‘अर्थ’ फिल्मको चक्का घुसाएँ । गीत बज्न थाल्यो :
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो … ।
चिया पिउँदै मेरो अव्यावहारिक जीवन–ढाँचाबारे उसले चाख राखी । अस्तव्यस्तता एवं अव्यावहारिकता नै मेरो जीवनको व्यावहारिकता भयो । यस्तै केही भनेँ ।
ऊसित प्रशस्त जिज्ञासा थिए, मेरो चरित्रलाई लिएर । म बर्सात्मा विनाकारण किन रूझ्न मन पराउँछु ? साँझपख एक्लैएक्लै फगत गीतार बजाई म किन उदास गीतहरू गाउने गर्छु ? विनाकारण म किन शिव शर्माको (नजिकैको दारू अड्डा) पसलमा रक्सी पिउने गर्छु ? विनाकारण म किन ऋतुको चिया पसलमा घन्टौं पुस्तक पढी आफ्नो युवा आयु खल्लास गर्दो रहेछु ? जागिर खान छाडी म व्यर्थमा किन चुरोट खाँदो रहेछु ? उसका यस्ता टाइपका जिज्ञासा सुनी म केवल फिस्स, फिस्स फगत फिस्स गरिरहेँ । मसित यस्ता प्रश्नहरूका नैतिक जवाफ पनि त थिएनन् नि !
जाने बखत उसले भनी : ‘कुमारजी ! तपाईं एकदमै अनौठो मान्छे हुनुहुन्छ । तपाईं जस्तो हरफनमौला मैले आजसम्म भेटेकी छैन । ज्यादै अजीव ! अहिले जान्छु । तपाईंको कोठा चिटिक्क बनाइदिएकोमा मसित नरिसाइदिनुहोला ।’
मेरो सामानहरू लिएर ऊ गई । सामानसित केही टुक्रा मुटु पनि लिएर गई । फर्केर कहिले पो आउली ?
पाटन, चाकुपाटको रू. ६०० को डेरा मलाई भव्य लाग्न थाल्यो । वरपर फैलिएका खेतबारीहरू सुन्दर लाग्न थाले । कहाँसम्म भने कोठाबाहिर बग्ने खुल्ला ढलको पानी पनि कलकल गरी बगेजस्तो लाग्न थाल्यो ।
‘पल्लो घरको झयाल’मा बस्ने मीरा जादुगर्नी थिई । बेँसीसहरकी यो भद्र महिला आकारमा नेपाली महिलासमान औसतकी थिई । औसत उचाइ । औसत लवाइखवाइ । औसत रुचि । ओठ, आँखा, केशविन्यास, नितम्ब, वक्षस्थलका शास्त्रीय चर्चा यहाँ नगरुँ । यति हो, हरेक नेपाली स्त्रीझैँ ऊ आकर्षक थिई, राम्री थिई, सुन्दर थिई ।
उसको पार्टटाइम–पति पोखराको कुनै नुडल्स कारखानाको म्यानेजर थियो । बिदामा यदाकदा पोखराबाट चिनियाँ मोटरसाइकल कुदाउँदै ऊ मीरा भट्टराईलाई भेट्न आउँथ्यो । त्यो भद्र पुरुषसित मेरो कहिल्यै भेट भएन । मलाई ऊ कुनै भिजिटिङ प्रोफेसर जस्तै लाग्थ्यो । यस्तै पन्ध्र/सोह्र दिनमा आउँथ्यो, घर खर्च दिन्थ्यो, रातमा सम्भोग–सेक्स यस्तै केही गर्थ्यो र अर्को बिहानै भालेको डाकसितै चिनियाँ बाइक स्टार्ट गर्थ्यो र नुडल्स फ्याक्ट्री भेट्टाउन पोखरा रवाना हुन्थ्यो । यस्तै थियो जम्माजम्मी मीरा भट्टराईको दाम्पत्य जीवनको रामकहानी ।
मेरो अजीवोगरिब जीवन–ढाँचा यथावत् थियो । पसलमा उधारोले डाँडा काटेपछि घरमा बुबालाई चिठी लेखेँ :
पूजनीय पिताज्यू !
साष्टांग ढोग ! आराम छु, आराम चाहन्छु । तपाईंले मेरोबारे कुनै चिन्ता नलिनुहोला ।
कलेज र रत्नराज्य बहुमुखी क्याम्पस नगए पनि आइए पढिराछु डेरामै । किताबहरू किन्नका निम्ति दस/बाह्र हजारको खाँचो परेको छ । पसलमा उधारो पनि तिर्नु छ । कृपया, पठाइदिनुहोला ।
हजुरको आज्ञाकारी छोरा,
उही, कुमार नगरकोटी
तर कालान्तरमा, केही समय म कुमार नगरकोटी रहिनँ । नाम परिवर्तन गरी ‘मिराज’ लेख्न थालेँ । मिराज अर्थात् मीरा भट्टराईको । मिराज (mirage) को अंग्रेजी अर्थले पनि त्यस बेलाको मेरो मनोदशालाई म्याच गर्थ्यो । मृगतृष्णा…। मिराज अर्थात् मीराको । मिराज अर्थात् मृगतृष्णा ।
मिराजको नाममा मैले केही कथा, कविता लेखेँ । साहित्यिक उपनाम भन्छन् नि साहित्य अध्येताहरू ! समकालीन साहित्यको ३५ औ अंकमा मिराज श्रेष्ठको नाममा एउटा लेख प्रकाशित छ : ‘स्यामुएल बेकेट : एक फ्ल्यासब्याक’ ।
एक साँझ मीरा आई । इस्त्री लगाइएका कमिज र प्यान्टहरू, डायरी, कविताका नोट–बुक र गजलका चक्काहरू लिएर आई । आफैँले चिया बनाउन थाली । थोत्रो फिलिप्समा पुन: बज्न थाल्यो गीत :
चिया पिउँदै उसले भनी, ‘तपाईंको डायरी मन पर्‍यो । तर, कविताहरू छेउटुप्पा केही बुझ्न सकिनँ । बुझिने कविता पनि लेख्नुस् न !’
स्वीकारेँ उस्का कुराहरू । कविताहरू मेरो युवा मनोदशाभन्दा जटिल नै थिए । मोहन कोइराला, ईश्वरवल्लभ, टिएस इलियट, एज्रा पाउन्ड, गिन्सबर्गलाई मन पराउथेँ, ती जटिल कालमा । भूपी शेरचन, वाशु र बासो, चुआङ जु कुन्नि कता थिए ! तर, मचाहिँ केही अब्स्ट्राक्ट अवश्य थिएँ ।
उसले अरू थुपै्र कुरा पनि गरी–आफ्नो बाल्यकालको बेँसीसहरको नोस्टाल्जियाहरू । पोखरामा बिताएका रमणिय दिनहरू । आफ्नो हजबेन्डसित घुमेका, बिताएका क्षणहरू । ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ले उसलाई पत्नी बनाई काठमाडौं ल्याएको कुरा ।
मैले सुनेँ उसका अतीतका गाथाहरू ।
मीराको आवाज केही रूझेको, भिजेको थियो । सदा त्यस्तै अलिकति नासल–टोन आउँथ्यो । नाके आवाज र मलाई मन पर्ने गायक अरूणा लामाको वेदनामय आवाजझैँ ।
वास्तवमा, ऊ ज्यादै एक्ली थिई । ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’ कहिलेकाहीँ मात्र आउँथ्यो । प्राय: ऊ पल्लो घरको झयालमा धुम्धुती बस्थी । साथीसंगीहरू कोही थिएनन् । आउटसाइडरझैँ थिई । मानिस कुरा काट्थे । उसका मनमा केके कुरा खेल्दै बस्दो हो । बच्चासच्चा थिएनन् । बच्चा जन्माउन चाहँदैन रे लोग्ने । के ऊ पत्नीलाई भेट्न मात्रै चाहन्थ्यो ? लोग्ने–स्वास्नीबीच उमेरको पनि ठूलो फरक थियो । कसोकसो माया लागेर आउँथ्यो, मीरा भट्टराईको ।
उमेरले ऊ पच्चीस–छब्बीसकी थिई । म थिएँ, बीस वर्षको । आफूभन्दा पाँच/छ वर्ष जेठी महिलासित पिरती लगाउन मिल्छ ? अर्काकी पत्नीसित पिरेम गर्न सकिन्छ ? यस्ता नैतिक प्रश्नहरूले दिमागलाई तर्साउँथ्यो । तर, मेरो आदिम हृदयले भन्थ्यो, जरुर मिल्छ बच्चु ! तर उत्तिखेरै चतुर दिमाग भन्थ्यो, न न, यो त पतन मार्गतर्फको अनैतिक यात्रा हो ।
मैले पतन मार्ग रोजेँ । आदिम हृदयको आवाज सुनेँ ।
प्रेममा तर्क गरिन्न, त्यो भनेँ । वैध, अवैधको हिसाब–किताब गरी प्रेम गरिँदैन, त्यो पनि भनिसकेकै छु । अब हातमा बहिखाता बोकी प्रेमको पवित्र मार्गमा हिँडिदैन । खलिल जीव्रान आफ्नो रचनामा प्राय: ‘प्रेममा सहिद’ हुने चर्चा गरी बस्छन् । मैले सहिद हुने पथ रूचाएँ । मध्यरातमा शंखमूल घाटमा गीतार बजाउँदै गीत गुनगुनाउन रूचाएँ :
मैले पुण्य मन पराएँ, या पाप मन पराएँ
जे होस् मैले तिमीलाई, चुपचाप मन पराएँ… ।
मीरालाई मैले नि:सर्त मन पराएँ ।
‘तपाईंलाई कस्तो रङ मन पर्छ ?’ त्यो साँझ उसले सोधेकी थिई !
‘सबै रङ मन पर्छ ।’
‘तैपनि, विशेष ?’
‘छया यो त जोगीको रङ भैगो ।’
‘म जोगी नै त हुँ नि,’ हाँस्दै भनेको थिएँ ।
उसले औंलाको बित्ताले मेरो छाती नाप्न थाली । कुम नाप्न थाली । ‘के गर्न थाल्नु भो ?’ भनी सोधेँ ।
‘जोगीलाई एउटा स्वेटर बनाइदिनु परो,’ उसले भनी ।
‘त्यसो भए, मैले स्वेटर लगाउन पाउने भएँ, होइन ?’ होम मेड पहेँलो स्वेटर । त्यसपछि ऊ गई ।
उसले फर्काएका नोट–बुकहरूलाई यसो पुस्तक र्‍याकमा मिलाएर राख्नुपर्‍योभन्दा एउटा कापीबाट तीनवटा फोटो भुइँमा झरे । उठाई हेरेँ । सबै तस्बिरमा ऊ उदास देखिन्थी । कापीको खाली पानामा पनि उसले केही लेखेकी रै’छे । बाङ्गाटिङ्गा शब्दाक्षरहरू पढेँ । त्यो लिखोट यहाँ जस्ताको तस्तै :
कुमारजी ! कहिलेकाहीँ जीवन किन यति खल्लो लाग्छ ? सबथोक भएर पनि केही नभएजस्तो । तपाईंका लेख, कविताहरू पढेँ । छपाउन पाए कस्तो जाति हुन्थ्यो । तर, तपाईं ज्यादै लापरवाही हुनुहुन्छ । म चाहन्छु, तपाईं राम्रो मानिस भएको हेर्न । तपाईं सुधृएको, व्यवस्थित भएको देख्न चाहन्छु । आफूलाई व्यवस्थित पार्नुहोस् । हुन त यस्तो भन्ने म तपाईंको को नै पो हुँ र ! तैपनि किन–किन तपाईंको माया लागेर आउँछ ।
यसरी एउटा जोगीको सुनसान हृदयमा एउटा फूल फुल्यो । गुलाब नै त भनी हाल्दिनँ । त्यो फूल सायद टयुलिप थियो । यसरी एउटा जोगीको सुनसान हृदयको मरूस्थल मनमा प्रेमका नयाँ घाँसहरू उम्रिए । पिरतीका अनाम पुतलीहरू हृदयाकाशमा उड्न थाले । प्रेमको दिव्य आभास, अनुभूति वसन्त ऋतु मात्रै होइन पतझरका मौसमहरू पनि महसुस गर्न थालेँ । हृदय नै एक सुकुमार काव्यखाना भइदियो । जीवन आशीर्वादपूर्ण लाग्न थाल्यो ।
काठमाडौंमा सुन्दर पार्क नभएकामा मेरो मनले मसित धेरै कचकच, गुनासो गरी बस्यो । त्यसो त पार्कमा, सार्वजनिक स्थलमा प्रेम गर्दै हिँड्ने मेरो प्रेम कदापि थिएन । मेरो प्रेम समाजका तथाकथित भद्र भलाद्मीहरूले गर्ने अनुष्ठानभन्दा अलि बेग्लै थियो । उनीहरू भनिदिन्छन् नि : एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स … ।
त्यसपछि– लभ स्टोरी, रोमान्टिक फिल्म कहिल्यै नरूचाउने मैले मीरासितै पाटनको अशोक सिनेमा हल (आजकल त्यो हल ‘पार्टी प्यालेस’मा रूपान्तरण भएको छ)मा ‘दिलवाले दुल्हनियाले जाएँगे’ टाइपका फिल्महरू रुचिसाथ हेरेँ, त्यो पनि ब्ल्याकमा टिकट काटेर ।
दक्षिणकालीको सवारी चलाइन्थ्यो । नगरकोटको ‘मिड टावर’बाट अलिकति जीवन चियाउँथ्यौं ।
ऋतुको चिया पसलमा मीरा पनि मसितै घन्टौं बस्न थालेकी थिई । ऋतु केवल टुलुटुलु, फगत ट्वाल्ल–ट्वाल्ल मलाई हेरी बस्थी ।
म साँझ अबेरसम्म डेराबाहिरको आँगनमा बस्थेँ । ‘पल्लो घरको झयाल’ खुल्लै हुन्थ्यो । झयालमै बसी ऊ कुरुसमा आफ्नो खिरिला औंला चलाइरहेकी हुन्थी । पहेँलो स्वेटर जो बन्दै थियो नि त ! रात अबेर हुने छाँट भएपछि मीरा झयालैमा उभिन्थी र इसाराले नै ‘गुडनाइट–किस’ दिन्थी । उताबाट उडी आएको त्यो उडन्ते चुम्बनलाई म पक्रेर राख्थेँ । त्यसपछि ऊ बत्ती निभाउँथी ।
मेरो हृदयमा जलिरहेको मैनबत्ती पनि निभ्थ्यो ।
अनि निद्रा ?
निद्रा त के लाग्थ्यो र ! निदाएको प्रशस्त बहानाचाहिँ निर्विकल्प रूपमा अवश्य गरिन्थ्यो ।
समय, आफैँ लुरूलुरू, खुरूखुरू हिँड्छु भन्यो । समयलाई रोक्ने कुरा पनि आएन । ऋतुको चिया–पसलमा मीराले एक साँझ भनी, ‘कुमारजी ! जिन्दगी किन सोचेजस्तो हुन्न ?’
यस्तो गहन प्रश्नको जवाफ कनीकुथी दिएँ । जिन्दगी सोचेजस्तो किन नभएको भनेर मानिस अनावश्यक रूपमा बढी नै सोच्छ । सोच्छ पनि के भन्नु र खै, बरू गुनासो गर्छ भनूँ । जीवनसित मानिसको धेरै गुनासो हुने गर्छ । यसो/उसो हुनुपर्थ्यो, भएन । यस्तो किन भएको होला ? यसो नभए उसो भएको भए कस्तो हुन्थ्यो ? मानिस अनावश्यक रूपमा बढी सोची बस्छ । जीवनप्रति ठूलो आग्रह, महत्त्वाकांक्षा राखी बाँच्छ । त्यसैले जिन्दगी सोचेजस्तो छैन ।
भन्न त भनेँ । तर, आफैँलाई चित्त बुझेन आफ्नो जवाफ । ‘चिया खाऔं ऋतु, कसो ?’ मौन तस्बिरलाई भनेँ । ऊ चुपचाप चिया बनाउन थाली । चियासितै उसले आफ्नो पार्थिव–हृदय उमाल्न थाली स्टोभमा ।
त्यो साँझ मीराको कोठामा सन्ध्या–भोजन गरेँ । मांस–परिकार अरूले बनाएको रूचाउन्न थिएँ । तसर्थ, आफैँले ‘मटन ग्रेभी’ बनाएँ । स्वादिलो छ, मीराले मेरो पाक कलाको प्रशंसा गरी । स्वेटर लगभग आधाउधी तयार भएको रैछ । कुरूससितै उसले पीत–वस्त्रलाई मेरो आङमा जाँची । ऊ ढुक्क भई । स्वेटरको आकार मेरो तामसिक–देहसित म्याच गर्‍यो ।
केही बेर यताउतिका सार्वजनिक चासोका विषयको चर्चा गरेपछि उदास मुद्रामा मीराले भनी, ‘कुमार ! यसरी कतिन्जेल गुपचुप बस्ने ? पोखरामा बूढाको अर्कै बूढी छ भन्ने मलाई शंका छ । मलाई त आफ्नो जीवनदेखि वाक्कदिक्क लागिसक्यो । तपाईंको माया लाग्छ तर के गर्ने खै ? यो प्रेमको अन्त्य कसरी हुने होला ? कहाली लाग्छ । चिन्ताले सताउँछ । निद्रा लाग्दैन । मेरो एक्लो जीवनमा तपाईं आउनुभयो, कहिले त लाग्छ किन आउनुभयो ? मलाई रूवाउन ? यो समाजले हाम्रो प्रेमको के फैसला गर्ने हो, कुन्नि ?’
उसको नासल टोनमा हिक्कहिक्क थियो । उसका आँखा आँसुले भरिएका थिए । उसको हृदयमा सायद कुनै टुहुरो ईश्वर रोइरहेको थियो । वेदनाको त्यो प्रशान्त गहिराइमा मेरो आत्मा पनि छट्पटाइरहेको थियो । समाज, व्यवस्था, ईश्वर, नैतिकता परिदृश्यमा आउँदा भए, जाँदा भए । प्रेममा जोखिम त उठाउनै पर्ने भयो ।
‘डु हेल विथ दिस सोसाइटी । हामी विवाह गरौँ ?’ भनेँ ।
मीरा अवाक् रही । मलाई टुलुटुलु हेरी केही बेर । त्यसपछि ऊ त झन् रून पो थाली । मलाई उसको लोग्ने अर्थात् ‘भिजिटिङ प्रोफेसर’को बाल थिएन । समाजले, साथीभाइले, आफन्तले के भन्ला बाल थिएन । म केवल प्रेममा सहिद हुन चाहन्थेँ । उसका मोती दानाहरू पुछिदिएँ । उसलाई अँगालोमा बेरेँ । बोल्नु केही थिएन । मौनताको त्यो घडीमा नि:शब्द हुनु नै हाम्रो नियति, प्रारब्ध, उत्सव थियो ।
साँच्ची ! प्रेममा सहिद हुनु कति गाह्रो रै’छ । खलिल जीव्रानले कसरी भन्न सकेको होला त्यस्तो कुरा !
मेरो ओठलाई चुम्दै उसले भनी, ‘कुमार ! मेरो जीवनमा किन आउनुभयो यसरी ? कहिलेकाहीँ धिक्कार लाग्छ आफैँलाई देखेर । माया किन यस्तो अनौठो हुन्छ ? आज म पतित हुन चाहन्छु । पतित मीरा नगरकोटी हुन चाहन्छु ।’
आखिर, शारीरिक सुख भनेको के हो ? बायोलोजिकल–इच्छा भनेको के हो ? यौन–विशेषज्ञले भन्ने गरेको सम्भोग सुख भनेको के हो ? सन्तान–सुख भनेको के हो ?
‘भिजिटिङ प्रोफेसर’को कन्डमको प्याकेट छेवैमा थियो । मीराले त्यसलाई झयालबाटै मिल्काइदिई । पूर्णरूपमा बेहोसबेहोसमा, मादकताले खर्लप्प निलेको अवस्थामा उसले भनी, ‘केको डर कुमार ! भुँडी बोके पनि तिम्रै बोकूँला ।’
आजकाल लाग्छ मलाई, त्यो सेक्स पतित थिएन । अहिले त्यो अतित भए पनि पतित थिएन । त्यो रातको स्मृतिले आजकाल पनि मलाई यदाकदा डस्न आउँछ । सर्पदशंझैँ ! संसारमा सम्भोग पवित्र कर्म थियो, छ र रहिरहनेछ । लुकीलुकी कामवासनाद्वारा ग्रस्त समाजका तथाकथित नैतिक भद्रभलाद्मीका सम्भोगप्रति मेरो ‘आलोचनात्मक समर्थन’जस्तो कुनै राजनीतिक टिप्पणी छैन । मेरो प्रेम मन्दिर हो । सम्भोग एक पवित्र तीर्थयात्रा हो । तीर्थयात्रामा हिँडेको म एक जोगी थिएँ ।
तर, जीवन विरोधाभासको अर्को नाम पनि हो । टोलमा केही गाइँगुइँ–हल्ला बतासमा घुम्न थालेको मैले सुनेँ । म, अर्थात् कुमार नगरकोटी ‘मीराको मोहन’ भएको सामाजिक टिप्पणी मैले सुनेँ । म ‘मोहनलाल’ भएकामा मीराले दु:ख व्यक्त गरी । ‘एक कान, दुई कान मैदान’ भन्ने जुन सार्वजनिक लोकोक्ति छ, त्यसले अन्तत: ‘पु्रफ’ गर्ने छाँटकाँट देखाउन थाल्यो । भिजिटिङ प्रोफेसरलाई यसबारे केही थाहा हुने कुरा भएन । ऊ त आउँथ्यो, जान्थ्यो ।
यही बेला बुबाको खबर आयो, गाउँबाट । ‘नाथे कुमार ! गाउँ आइज, म क्रमश: मर्दै छु …. ।’
मीरालाई भने, ‘गाउँ जाऔं । उतै बसौं । बुबा अलि लिबरल हुनुहुन्छ । हाम्रो सम्बन्धलाई स्वीकार्नु हुनेछ ।’
ऊ गाउँ जान तयार भइन । आफूसित प्रेमिकालाई फकाउने कला थिएन । सदा अड्वाङ्गे थिएँ, र छु । मीरालाई फकाएर गाउँ लान सकिनँ । भनी, ‘चाँडै आउनुस् । म तपाईंलाई पर्खन्छु ।’
वि. सं. २०५३ ।
गाउँ, खुर्कोट जाँदा थाहा पाएँ, बुबालाई घाँटीको क्यान्सर भएको रैछ । डाक्टरहरूले उहाँलाई ‘बाँच्ने’ केही समय प्रेस्क्राइब गरेका रैछन् ।
बुबा क्रमश: खिइँदै जानुभयो । दिन प्रतिदिन उहाँ मेरो अगाडि मर्दै जानुभयो । उहाँ मेरा निम्ति पिता, बुबा, बा, या डयाडी मात्र हुनुहुन्थेन, साथी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँका निम्ति म ‘फुच्चे/नाथे कुमार’ थिएँ ।
मृत्युशय्यामा आराम गरिरहेका बुबालाई मैले एक दिन भनेँ, ‘बुबा, म एउटी आइमाइसित प्रेम गर्छु ।’
‘नाथे कुमार ! लोग्ने मान्छेले प्रेम गर्ने भनेको आइमाइसित त हो नि ! तेरी आमालाई मैले गोरखाबाट भगाएर विवाह गरी ल्याएको हुँ क्यारे !’ हाँस्दै भन्नुभयो, ‘तेरी आइमाई चाहिँ के थरकी हो ?’
‘बजिया ! आफू नेवार भएर बाहुनी पो ताक्दो रैछ !’ आफ्नै सेन्स अफ हयुमरमा उहाँले भन्नुभो ।
म चुप ।
‘जातको त के कुरा भयो र ! प्रेममा जातभात हुँदैन । बुझिराख्, केटा । तेरी आमा पनि त गुरूङ हो । होइन भने भन क्यारे ?’
‘त्यो त हो, बुबा । तर ऊ मभन्दा उमेरले जेठी छे ।’
‘तब के भयो र ! दुईमध्ये एकजना जेठो, कान्छो हुने भइहाल्यो नि ! खै कुरो बुझेको तैंले ? अलिकति लिबरल बन्न यार् ।’
‘तर एउटा समस्या छ, बुबा,’ सोचविचार गरी भनेँ, ‘ऊ विवाहित छे ।’
‘नाथे कुमार ! संसारमा कुनै आइमाई फेला पारिनस् र अर्काको स्वास्नीसँग पिरती लाउन पुगिस्’ भन्नुहोला सोचेको थिएँ तर बुबा मौन रहनुभयो ।
गाली खान तयार थिएँ । तर, गाली नै गर्नुहुन्न बा ! कान समाई उठबस् गर्न तयार थिएँ । तर, चाइँचुइँ केही छैन बा ! बडो यातना भयो । उहाँको अनुहार हेर्छु । त्यहाँ ‘सेन्स–अफ–हयुमर’को कुनै लक्षण छैन । बुबाका थुपै्र आशा, आकांक्षा थिए होलान् । मैले ध्वस्त पारिदिएँ सायद, पिताका सारा सपना ।
केही समयपछि बुबाले शान्त मुद्रामा भन्नुभयो, ‘नाथे कुमार ! यो समस्या होइन, ठूलो समस्या हो । अरे स्वाँठेलाल ! कुनै विवाहित महिलासित प्रेम गर्नुअघि तैंले मलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो ! म त मर्दै छु । म मरेपछि सबै जिम्मा तेरै हो । तेरो भाइ सानै छ, बुयिनी सानै छे । पिरती लाउने पनि तरिका हुन्छ नि, नाथे !’
मुन्टो मेरो झुक्यो । बुबालाई हेर्न सकिनँ । तरै पनि बुबालाई सोधेँ, ‘म सजाय भोग्न तयार छु, बुबा !’
बुबा चुपचाप । मीरा भट्टराईको अनुहार मेरा आँखामा छाइरह्यो ।
बुबाले भन्नुभयो, ‘हेर्, केटा ! म तेरो बाउ हुँ । तँलाई मैले आमाको पाठेघरमा हुँदैदेखि चिनेको छु । टाउको झुकाउनुपर्ने कुनै लज्जित काम तैंले गरेको छैनस् । संसारमा यस्ता मानिस धेरै छन्, तँ मात्रै एक्लै होइनस् ।
‘प्रेम यस्तै हुन्छ, प्रेम अन्धो हुन्छ, मानिसहरू भन्छन् । म अर्थात् तेरो बाउ रत्नबहादुर नगरकोटी भन्छु, अन्धो/सन्धो हुँदैन प्रेम । यति मात्रै हो कि प्रेम गर्ने मानिस कहिलेकाहीँ अन्धो भइदिने गर्छन् । तेरो प्रसंग पनि त्यस्तै हो । तर, जीवनमा अनुभूति, अनुभव गर्दै जा । समयले तँलाई जम्मै सिकाउँछ । नाथे कुमार ! समय ठूलो गुरू हो ।’
बुबाले आफ्नो जीवनकालको अन्त्यतिर आफ्नो प्राइभेट डेथ–बेडबाट भनेको कुरा ठीकै त होला भन्ने लाग्यो नाथे कुमारलाई ।
समय आफ्नै गतिमा अगतिलो किसिमले हिँड्न थाल्यो । अस्तित्वसित, जगतसित मेरा थुप्रै प्रश्न थिए । एउटा कथा लेख्न बसेँ, ‘निकास’ ।
०५४ वैशाख १७मा बुबा अस्तित्वदेखि अन्तत: अन्त्य हुनुभयो ।
तेह्र दिनको बर्खी सकिएपछि एक साँझ डायरीमा लेखेँ :
जीवन एक मिराज हो । मिराज अर्थात्, एक मृगतृष्णा ।
चाकुपाटको पुरानो डेरामा स्मृतिका धुलो, धुवाँ पत्रैपत्र जमेका थिए ।
तैपनि, आफ्नो कोठा आफ्नो जस्तो लागेन । मेरो अनुपस्थितिमा धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको थियो ।
ऋतुको चिया–पसल सदाको निम्ति बन्द भै’सकेको थियो । उसको परिवारै डेरा सरी कुन्नि कता गएछन् ।
मीरा भट्टराईको ‘पल्लो घरको झयाल’मा अर्कै महिला देखा पर्न थाली । साँझपख, सिग्रेट उडाउँदै ती झयालहरूमा आँखा पुर्‍याउँदा आँखै उदास, उजाड हुन्थे । डेरा नजिकैबाट बग्ने खुल्ला ढलको पानी कलकल गर्न छाडयो । बरू, यति साह्रो किन गन्हाउँछ यो ढल भनी आफैँसित गनगन, फतफत गर्न थालेँ । बुबा रहेनन् । ऋतुको चिया पसल रहेन । मीरा रहिन । मेरो सडेगलेको आत्मा मेरो कोठामा निदाउन थाल्यो ।
मीरा भट्टराईले इस्त्री गरेका प्यान्ट कमिजहरू लगाउन मन भएन । पुरानो टयाङ्कामा थन्काइदिएँ, थान्को लगाइदिएँ । बरू, दुई–चार जोर लिभाइजका ब्लु, ब्ल्याक जिन्स प्लस टाइट टि–सर्ट लाउन थालेँ । थोत्रो फिलिप्स टेप रेकर्डरमा बिबिसी सुन्न थालेँ । पाटनको ‘अशोक’ सिनेमा हलमा यश चोपडाको दिलवाले दुल्हनियाले जाएँगे किन पो लाग्थ्यो र ! बरू त्यहाँ गई नाना पाटेकरका अग्निसाक्षी, युगपुरुष, प्रहार टाइपका फिल्ममा रमाउन थालेँ ।
आफ्नो मनलाई जसोतसो सम्हालेँ ।
एक दिन चाकुपाटबाट आफ्नो सामान कसेँ । ‘बसाइ’ जानुपर्‍यो, सोचेँ । मरूभूमिमा अरू के बसाइ भयो र ! आफ्नो हृदयलाई सम्झाइबुझाइ गरेँ । यसो कहिलेकाहीँ, पुराना यादहरूले सताए भने नोस्टाल्जियाको उँट चढी घुम्न जानुपर्ला त्यो मरूभूमिमा ।
पाटनकै ल:खुशी नामक गल्लीमा नयाँ डेरा लिएँ रू. ९५०मा । पढाउनका निम्ति चापागाउँमा एउटा विद्यालय फेला पारेँ । अंग्रेजीका व्याकरण नवागन्तुक बच्चाहरूलाई सिकाउन थालेँ । तलब थापेँ । बिहानदेखि साँझसम्मै पढाएँ । टयुसन–कक्षा लिएँ ।
बिदाका दिनहरूमा पाटनका गल्लीहरू घुम्थेँ । कुनै क्याफेमा बसी ब्ल्याक–कफी पिउँदै कहिलकाहीँ सोच्थेँ :
प्रिय मीरा ! भिजिटिङ प्रोफेसरको चिनियाँ मोटरसाइकलको पछिल्लो सिटमा बसी तिमी अहिले कुन उपत्यका, वन, उपवन डुलिरहेकी छौ ?
मीरा, कुन्नि कुन प्रदेशमा थिई । ऋतु एक दिन अपर्झट मेरो हृदयको दैलो ढकढकाउन आइपुगी ।
समयको धेरै ‘मध्यान्तर’पश्चात् ऋतुसित मेरो पाटनको गा:बाहालको भित्री चोकमा एक साँझ भेट भयो । हाई हेल्लो गर्‍यौं, एक वृक्षमुनि । चिया–पसल छोडेपछि उसको परिवार बगलामुखी मन्दिर छेवैको गल्लीको प्राचीन घरको एउटा फ्ल्याटमा बस्दा रै’छन् ।
उसले भनी, ‘तपाईं गाउँ जानुभयो । मीरा भट्टराई पोखरा गई आफ्नो लोग्नेसितै । तपाईंविनाको हाम्रो चिया पसल खल्लो भयो, पसल बन्द गर्‍यौं ।’
भागवत् गीताको शैलीमा मौन तपस्वीलाई भनेँ : ‘ऋतु ! जे थियो ठिक थियो । जे हुन्छ ठिक हुन्छ । (व्यर्थ क्यों चिन्ता करे ।)’
ऋतुले भनी, ‘तपाईंलाई धेरै खोजेँ चाकुपाटको डेरा छाडी कुन्नि कता गायब हुनुभो ।’
कमसेकम, म गायब भएको कुरा उसलाई थाहा रहेछ । कसैले, यसरी मलाई खोजी गर्नु ठीकै कुरा हो । नत्र मानिसहरू संसारको भीडमा यसरी हराउँछन् कि के भनूँ ।
पाँच वर्षभरिको आफ्नो हृदयमा गुम्सिएर रहेको ‘गुप्ती–कुरा’ मौन तपस्वीले यसरी खोली, ‘कुमारजी, वास्तवमा म तपाईंलाई प्रेम गर्छु । तपाईंसित बिताएका क्षण याद आइरहन्छन् । तपाईं अनौठो मान्छे हुनुहुन्थ्यो । मलाई थाहा थियो, तपाईं मीरालाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो । अर्काकी स्वास्नीको पछाडि किन लागेको होला भनी तपाईंसित रिस उठ्थ्यो ! तर प्रेम भन्ने चीज पनि त अनौठो हुँदो रै’छ ।’
मौन तपस्वीको कुरामा ‘वजन’ थियो । वजनदार कुरा हुँदा म प्राय: चुप रहन मन पराउँछु । उसको कुरा सुनेर बसिरहेँ ।
त्यसको केही दिनपछि एक साँझ ऋतुलाई शंखमूल घाट लिएर गएँ । एउटा लास जलिरहेको थियो । लासका आफन्तहरू पेटीमा बसी रोइरहेका थिए । मौन तपस्वीलाई भनेँ, ‘ऋतु ! प्रेमस्रेम के गरिरहने ? त्यो विवाहपछि गरौंला । विवाह गर्ने हो ?’
वि.सं २०५८ ।
जेठ ५ गते ऋतुसित विवाह भयो ।
पुण्य अवसरको ‘तिथि’मा आफ्नो सम्पूर्ण आफन्तजनलाई बोलाएँ अनि पाशुपात क्षेत्रको गुह्येश्वरी मन्दिरमा जीवनमा पहिलोपटक ‘दुलाहा’ भएँ । दुबोको माला घाँटीमा लगाएँ । मौन तपस्वी अर्थात् ऋतु गौतमको सिउँदोमा सिन्दुर भरिदिएँ । मान्यजनहरूले आशीर्वाद दिए । भोजभत्तेर (नेवारी ढाँचाको) भै पो गयो । आमालाई गाउँमा अन्तत: हवाई–खबरमार्फत विवाहको सुसमाचार पठाएँ ।
आफ्नो जोगी–छोराले अन्तत: विवाह गरेकामा उहाँ खुसी हुनुभएको कुरा थाहा पाएँ । खुसी जस्तै केही भएँ । तर, गुरुङसेनी आमाको ‘खुसी’ लामो समय टिकेन । वैवाहिक जीवनका ती संक्षिप्त लफडाहरूबारे यहाँ चर्चा नगरूँ !
लगत्तै जेठ १९ आइपुग्यो । त्यो रात, उता तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । तथाकथित कालो पदार्थ खाएर दीपेन्द्रले नारानहिटीमा ‘सुटआउट’ गर्दा ऋतु र म (सम्भोग–पश्चात्) काजु, बदाम, किसमिस खाइरहेका रहेछौँ ।
बिहानै उठ्दा ढोकैमा ‘कान्तिपुर’ आयो । पढेँ, अशुभ समाचार रै’छ । टिभी खोलेँ, सबै राष्ट्रिय च्यानलमा शोक–धून बजिरहेथ्यो । ऋतुले आफ्नो सामान प्याक गरी । माइती जान्छु भनी । हुन्छ, जाऊ भनेँ । गल्लीको मोडसम्म पुर्‍याएँ । आफैँ जान्छु भनी । हुन्छ जाऊ भनेँ । ०५८ जेठ २० गते बिहान माइती हिँडेकी ऋतु मेरो घर फर्केर कहिल्यै आइन ।
काठमाडौंलगायत पूरै देश शोकमग्न थियो । राज्यले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै राष्ट्रिय ‘बिदा’ घोषणा गर्‍यो । मेरो आफ्नै हृदयको ‘राज्य’ पनि क्रमश: टुक्रिरहेको थियो ।
मंगलबजारको पुरातात्विक चिया–पसलमा हलुवापुरी खाएँ । पसलमा, बाटोघाटोमा मुडुला टाउका बोकी हिँडेका भद्रजनहरू देखेँ । एउटा सैलुनमा छिरेँ । प्रिय हजामले नि:शुल्क केश मुण्डन गरिदियो । एक थान मुडुलो टाउको बोकी म सडकमा हिडेँ, सिग्रेट पिउँदै ।
चङ्गासरी यो मनलाई
मझेरीमा दियो छैन
मझेरी भलाकुसारी, अंक १५ (राजेश रुम्बा लामा अतृप्त)
छोरा या छोरी
मान्छे हाम्फाल्ने खाल्डो
मझेरी भलाकुसारी, अंक १२ (देश सुब्बा)
पत्र कथा :– प्रेमिकालाई पत्र
म नि हजुर जस्तै हुनेछु बाबा आमा
पर्छ न्याय रेखा गनी
मझेरी भलाकुसारी, अंक १९ (चूडा निर्भीक)
स्वच्छन्द कुनै सरकार हुँदैन
आफ्नासँग छुट्दा रोएँ
समुद्रमा उर्लिएको छाल
उतर-दक्षिण गरि-गरि,राष्ट भक्त गलाउदै छन्...
कोक्रो हरायो, लोरी हरायो
माफ गर ल